Social Media: SAP Global Survey (Nkebi nke Abụọ) | Martech Zone
Social Media: SAP Global Survey (Nkebi nke II)
Akụkọ n'azụ otu m siri nwee mmasị na Social Media bụ nkọwa zuru oke - njikọta ebe m rụrụ ọrụ, ihe m mere maka ndụ na ndị nwere mmetụta na ndụ m. Ihe siri ike, n'eziokwu, na m dere ihe niile Kedu ka m si nwee mmasị na Social Media. Shel nyefere ajụjụ ndị ọzọ dị oke mkpa, yabụ achọrọ m ịza ndị ahụ na usoro a.
2. Kedu ngwa ọrụ mgbasa ozi ị na-eji?
Isi, m na-eji WordPress, Del.icio.us, Njikọ, Plaxo, na Jaiku. M na-ejikwa Facebook, Myspace, Ahịhịa, Twitter na Pownce. Na mpaghara, m na-ejikwa ya IndyMojo na, n'ezie, MyColts.net.
3. Kedu otu mgbasa ozi mgbasa ozi si agbanwe azụmahịa gị na / ma ọ bụ ndụ gị?
Ahụrụ m isiokwu ole na ole na otu Social Media si dị egbusi oge anyị. Isiokwu ndị a pere ezigbo mpe n'otú ha si arụ ọrụ ịkparịta ụka n'andntanet na otú ha si enyere anyị aka ịrụpụta ihe karị. Azụmaahịa na-ebu ụzọ eme site na mmekọrịta media Social media na-enye anyị ohere ijikọ ndị mmadụ karịa ka anyị nwere n'oge gara aga.
Taa, achọrọ m inweta ọrụ faksị dị ọnụ ala maka ụlọ ọrụ m. Achọrọ m Del.icio.us wee chọta Nkọwapụta. Ọzọ, Ana m achọ mpaghara mpaghara maka idobe akara ekwentị na ụlọ ọrụ ọhụụ ọhụrụ anyị - m ga-etinye ya dị ka ajụjụ na LinkedIn. The ọzọ bụ na-ewe oge na-achọ ụgbụ, na-akpọ obodo ulo oru, wdg Anyị na-ala n'iyi oge dị ukwuu na-enweghị ikike njikọ! Cheta ụbọchị ndị anyị na-enweghị ike ịchọ ihe na ịntanetị? M na-eme! Ọ dị egwu.
Banyere ndụ m, ọ nwere mmetụta dị ịtụnanya. Achọtara m ọrụ m na nso nso a site na blọọgụ m na ịkparịta ụka n'withntanet na ndị ọkachamara na mpaghara na Social Media, ana m ekwu okwu na nzukọ mpaghara na isiokwu ahụ ma ana m agbali ịhapụ onwe m n'ọrụ ogologo oge iji nyere ụfọdụ mpaghara aka na-abụghị uru.
4. Gwa m gbasara soshal midia na Indianapolis Colts. You na-eche n'ezie na mgbasa ozi mmekọrịta ga-enyere ha aka imeri Superbowl?
Indianapolis Colts ga-abụ onye izizi ga-agwa gị nke ahụ Nwoke nke iri na abụọ enyere aka iji merie egwuregwu ọ bụla. Nwoke nke iri na abụọ na-ezo aka na onye ofufe ahụ, onye ahụ pụọ n'ọhịa nwere mmetụta dị ukwuu na egwuregwu ahụ. Agarala m RCA Dome wee hụ egwuregwu ole na ole ma ọ dị egwu mkpọtụ na ume onye ofufe na-eweta n'egwuregwu! Chee echiche banyere ndụ nke gị ruo nwa oge ma cheta oge mmadụ kwere na gị. Ọ na-enye gị ike iji nwee ihe ịga nke ọma, ọ bụghị ya? Ugbu a chee na mpaghara dum na-akwado gị! Kedụ maka ndị fans ahụ gafere mpaghara mpaghara ahụ?
Ndị Colts nwere ihe karịrị otu nde mmadụ na-eleta weebụsaịtị ha. Otutu n’ime ha anaghi ebi na Indianapolis! Ọbụna ha nwere ndị agbapụ na mba ofesi na-eso egwuregwu ọ bụla ma soro na saịtị ha na-enweghị nkwụsị. Ajuju bidoro iju ajuju, kedu otu ndi otu ga esi jikota ya na onye o bula n’ile. Otu Social Network bụ azịza ya. Nchịkwa Dungy ugbu a ịde blọgụ! Chegodi… onye NFL NFL nwere mmekọrịta chiri anya na ndị otu egwuregwu.
Dika ndi otu egwuregwu ndi okacha amara, ndi Colts ghotara na oge di egwu na abia. O di nwute, ufodu Fans na-abia ma soro oge ndi a. Ndị Colts bụ azụmahịa yana otu egwuregwu ma ha kwesịrị ịrụ nnukwu ọrụ iji hụ na ha gosipụtara ekele. N'ahịa ndị ọzọ, a maara nke a dị ka iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa. Ndị Colts chọrọ ijikọ ndị Fans ha ka ọ bụrụ na mgbe oge siri ike, ndị Fans ahụ ka nọ. N'ihi ọrụ niile nzukọ a na-arụ, ha ga-arụ ya!
5. Gwa m gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ụlọ ọrụ nri na ụlọ nri. Ego ole ka eji ya? Kedu ka esi eji ya nke ọma?
Industrylọ ọrụ na-ere nri na ụlọ oriri na ọtaụ Resụ bụ ụlọ ọrụ nwere oke oke oke nwere ike iche n'echiche. Ọ bụ ezie na, dị ka mba, anyị na-aga n'ihu na-eri nri ọtụtụ mgbe, ụlọ nri na-ewu aka ekpe na aka nri right wee pụọ na azụmaahịa. Onye ọ bụla na-arụ ọrụ mgbe niile na ụlọ ọrụ na-enwe ekele mgbe ọ bụla ị na-aga n'ọnụ ụzọ ma mmadụ na-ekwu, "Hi Doug!". Na ntanetị, nke a abụghị iche. Lọ oriri na ọrantsụrantsụ na ọnụnọ dị ike n'ịntanetị na-ahụ 20% na 30% uto na ntinye na nnyefe. Ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na ha cheta usoro ikpeazụ gị ma ọ bụ efere kachasị amasị gị ma ọ bụ ahụ ị na-asọ ahụekere?
You na-eche mgbe ọ bụ onye na-esiri gị nri ahụ? M n'aka-eme! Gini mere i ji chee na ndi isi nri n’ime ulo ahia di oke onu? Ọ bụ njikọ mmekọrịta ya na onye nlekọta ahụ dị mkpa, ọ bụghị mgbe niile nri. Iri nri bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọ bụghị njikọ anụ ahụ - ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na-efu mgbe ha na-erughị ndị ahịa ha ntanetị. N'ụzọ dị mwute, n'ihi oke oke, ọtụtụ ndị achọghị ịbanye na ụlọ ọrụ a. Echere m na ndị na-eme ya, nwere ezigbo ngwaahịa ma, ọ bụrụ na ejiri ha, ha ga-enweta uru ya!
Anyị ga-esi ebe ahụ B2C akụkụ nke azụmahịa. Ndị hụrụ ihe oriri n'anya amalitelarị ọrụ ha. Lelee Ezi ntụziaka niile, na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ kwa ụbọchị. Ndi bekee ezitego ma juo ihe kpatara na odighi a Networklọ oriri na ọ socialụ socialụ na-elekọta mmadụ si n'ebe.
6. Odi ka iburu olu obi Heartland maka soshal midia. Nwere ike ịgwa m etu ndị mmadụ na azụmaahịa si eji ya eme ihe n'ozuzu? Kedu ngwá ọrụ ha na-eji?
Heartland bụ ebe ịtụnanya nwere nnukwu mmadụ na-arụsi ọrụ ike. A na-ele teknụzụ anya mgbe niile dị ka ngwa ọrụ mana ọ bụghị mgbe niile azịza ya ebe a. Companieslọ ọrụ mmepe ebe a na Indianapolis na-ewu ọtụtụ ngwaọrụ… ndị mmepe na-arụ ụfọdụ ngwa siri ike nke bụ azụ nke ọtụtụ ọrụ. Ebe silicon ndagwurugwu na-achọ mgbe niile 'echiche na-esote', ndị mmadụ nọ ebe a na-eche banyere ime ka azụmahịa dị ugbu a rụọ ọrụ.
N'ihi nke a, Social Media ka nọ na nwata. Ndị okenye na-elekarị ngwaọrụ ndị a anya dị ka ihe egwuregwu ụmụaka. M nwere ndị enyi na-enweghị IM m n'ihi na nke ahụ bụ ụdị ihe ụmụaka ha na-eme. Ọrụ anyị na Civic na Azụmaahịa nọ n'azụ na teknụzụ ọ bụla, n'agbanyeghị na Social Media. Universlọ akwụkwọ mahadum anyị kachasị mma na mba ahụ mana anyị tufuru ndị gụsịrị akwụkwọ na steeti ndị ọzọ n'ihi na ndị ahịa anyị agaghị emepe anya ya dịka Social Media dị ka azịza azụmaahịa bara uru.
Anyị ga-agbanwe, ma enwere ụfọdụ ndị nọ ebe a na obodo nke ga-eme ka mgbanwe ahụ gbanwee. Amaghị m na m nọ na olu, ma ejiri m n'aka na m ga-anọgide na-anwale. Enweghị ihe kpatara na anyị ekwesịghị ịsọ mpi na Seattle na San Jose nyere ụlọ akwụkwọ mara mma na ọnụ ahịa ibi ndụ anyị nwere ebe a!
7. Ka anyị kwuo maka azụmahịa n’izugbe. Ndi ahia di obere ma obu buru ibu, na-eji mgbasa ozi ndi mmadu na Midwest? Ruo n'ókè ha a ?aa?
Ikekwe ihe atụ kachasị mma n'iji Teknụzụ bụ enyi Roger Williams na Leaderslọ Ọrụ Ndị Isi Ọchịchị Mberede ebe a na Indianapolis. Roger liri onwe ya na Facebook iji jikọta ndị ntorobịa mpaghara.
Emerlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọchịchị Mberede (ELI) na-etinye Indianapolis mpaghara ndị na-eto eto ka ha bụrụ ndị na-ekere òkè na obodo anyị site na mmemme Enyemaka Indy Online (HIO) na Community Access Point (CAP). Ana m enweta eVites site na Roger kwa izu… ọ ga-agba ọsọ na otu narị kilomita n'otu awa. Ana m atụ anya inyere ya aka karịa n'ọdịnihu.
Mụ na Pat malitekwara M Họrọ Indy!, saịtị ebe ụmụ amaala mpaghara na ndị isi nwere ike ide, n'okwu nke aka ha, ihe kpatara ha ji hụ etiti Indiana n'anya. Tobanye na saịtị ahụ meghere ma ọ dịghị mmegbu ọ bụla. Akụkọ ndị ahụ dị egwu - ha na-arụkwa aka na ihe dị egwu banyere Indy. Ọ na-adị anyị ka anyị nwee ike iwepụtakwu oge na saịtị ahụ - mana ọ dị mma ịhụ ka ndị na-ebi akwụkwọ na-esiteghị n'oge ruo n'oge. Ọ bụ nnọọ Indiana!
Wezụga The Indianapolis Colts, akwụkwọ akụkọ mpaghara na-amalite ịhụ uru na Social Media yana. Lelee Ndi IndomMm, saịtị dị egwu nke akwụkwọ akụkọ mpaghara na-agba ọsọ na-eto nke ọma na ndị ọrụ wepụtara. Ọ dị m ka ya bụrụ na ụfọdụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ ga-ejide! Anyị nwere nnukwu akwụkwọ akụkọ ọzọ ebe a n'obodo a na di na nwunye dị egwu azụmaahịa (mgbasa ozi na mbipụta). Ekwenyere m na ha nwere ike melite ntinye ha site na Social Media.
IHE: Aga m agbali ịgbaso na ajụjụ ole na ole gara aga n'abalị a!
Tags: nyocha zuru ụwa ọnụsapsap nyocha ụwa
Aug 21, 2007 na 1:13 PM
Nwoke nke iri na abụọ bụ mkpọtụ igwe mmadụ ha na-akụ na ndị na-ekwu okwu.
Aug 21, 2007 na 2:48 PM
Na-ekwu na onye na-agba Steeler… unu nọ na-ada ụda nke ọma na oge ole na ole gara aga mgbe ị batara RCA Dome maka ihe egwuregwu!